Qgis - Ihe omuma atu nke omume oma na ihe omuma OpenSource - Geofumadas
Qgis - Ihe atụ nke ezigbo omume na ụdị OpenSource
Oge ọ bụla anyị nọrọ n’ihu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke na-achọ iji mepụta ikpo okwu nwere usoro nchịkwa ókèala, nke na-anụkarị ọtụtụ olu na-adịghị mma gbasara ụdị OpenSource, ajụjụ a na-ebilite n ’ọdịiche dị nta.
Kedu onye na-aza maka QGIS?
O yiri anyị ka ọ dị ọrụ ma bụrụkwa nke nkịtị, na onye na - ekpebi mkpebi na - achọ ịkwado mmemme nke enwere ike nyochaa ya n'oge adịghị anya -na nko ma ọ bụ site na crook-.
Ihe na - eme bụ na ụdị Sdị OpenSource siri ike ịkọwa, ọ bụ n'ihi na n'ọtụtụ oge, ndị isi nọ n'ọkwá nchịkwa na-anwa ịghọta ihe ndị ọkachamara na-enweghị ike ịkọwapụta. Ma kwa n'ihi na omume nke ndị na-eme ihe nkiri site na ndị ọrụ onwe ha na-anwa ime ka ọgba aghara, na-egosi na ngwanrọ n'efu abụghị ọkachamara, na ọ nweghị nkwado ma ọ bụ na ọ nwere ọdịnihu na-ejighị n'aka.
Ma nchekwube na obi ojoo kwesiri ịtụle, na-eche na ọtụtụ atụmatụ emeghe ihe adaala n'okporo ụzọ. Ozo n'ihi na ekwesighi ire ahia nke imeghari imeghe ihe dika nbudata onu ahia kama obu ohere iji nwekwuo ihe omuma, nke choro mmekorita na nkuzi na ihe omuma ohuru nke ime ihe n'eziokwu, obu ihe siri ike ire ... ma mezuo .
Okwu nke Qgis bụ ihe nlere na-adọrọ mmasị, nke enwere ike dee akwụkwọ ya otu ụbọchị. Ọ bụghị nke mbụ, ma ọ bụ naanị otu; Ihe ịga nke ọma dịka WordPress, PostGIS, Wikipedia na OpenStreetMap gosipụtara myirịta dị n'etiti ịdị elu na ohere azụmaahịa na-erite uru site na mmekorita mgbe emechara ihe ọmụma. Ma ọ bụ na miri ala, ọ na-abụghị iji gbochie ohere nke onwe oru ma ọ bụ na-àgwà megide ndị a ma ama ụdị na kpụrụ ahịa; kama, ọ bụ maka ịmachi ohere nke ihe ọhụụ na mmepe nke mmadụ site na ngwaọrụ teknụzụ, n'ụzọ kwesiri ekwesi.
Mana n'ikpeazụ, omume kachasị mma nke OpenSource Project nwere ike itinye ga-emerịrị n'etiti imewe arụmọrụ, ụkpụrụ ụlọ, onyonyo nke ụlọ ọrụ, njikwa obodo yana, nke ka mkpa, nkwado; Otu okwu nke na-adabaghi ​​ebe a na otu olu anyi jiri mee ihe na ndi oru mmekorita. Okwu ahụ masịrị m Uru mkpokọta.
Onye na akwado Qgis
Ọ bụ ihe ịtụnanya na ụdị Qgis nke ga-ebido n’ọnwa Machị nke 2016, nwere ụlọ ọrụ ndị a:
Ndị na-akwado ọla edo:
Asia air Survey, Japan. Site na 2012 nke a bụ ewumewu nke nwere ọtụtụ onyinye na ọrụ Qgis; nke nke dị na East East na-ahụ maka ịkwalite mmepe nke teknụzụ dị elu maka mpaghara geospatial.
Ndị Nlekọta ọla ọcha:
Sterarlberg steeti, Austria
Ọfịs Ọhaneze, Ireland
Mahadum Sayensị na Nkà na ụzụ, Poland
Ndị nkwado a na-egosi anyị etu o siri nwee na mpaghara Europe, yana njikọta n'etiti ngalaba Ọha, Ọha na nke Mmụta. Hụ na ha abụghị mba ndị nwere akụ na ụba, mana ọkwa nke usoro nke usoro ndị a na-akwado Qgis ka a ga-asọpụrụ, ruo n'ókè nke inwe ike ịkọwa n'ime itinye ego ha, nkwado maka ikpo okwu nke ụwa niile.
Ọ dịkwa mma ịhụ na mba ndị a enweghị oke ịda ogbenye na ọ dịghị mkpa iwelata ọnụahịa ngwanrọ. Yabụ OpenSource bụ usoro ọzọ maka ihe ọhụụ na mmelite nke ihe ọmụma na-emekọ ihe ọnụ.
Ndị nkwado Bronze:
GFI - Gesellschaft für Ozi teknụzụ, Germany
Obodo Royal nke Windsor na Maidenhead, United Kingdom
Buru Wegen vzw, Belgium
Nkwado GIS, Poland
Dị ka a pụrụ ịhụ site na ndepụta a, anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ ndị siri ike ma na-adịbeghị anya ọchụnta ego. Nke a bụ otuto anyị na MappingGIS, ụlọ ọrụ izizi n'asụsụ Spanish ịdebanye aha maka nkwado a.
Ọ dị mkpa ịghọta na ọ bụrụhaala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwado sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, anyị ga-enwe ụlọ ọrụ siri ike na-enye nkwado, anyị agaghị enwe naanị ndị mmepe na-anaghị akwụ ụgwọ maka ịrapara na ụgbọala, ide ederede na ịgwakọta biya na adrenaline. Kama nke ahụ, ndị ọkachamara ụlọ ọrụ goro n’okpuru ọrụ ụfọdụ akọwapụtara, yana ebumnuche, ụkpụrụ na nkwa dị mma.
N’ezie, adrenaline na isi nke oke oke dị oke mkpa, iji nye nnweko nke ihe ohuru a n’enye aka buru ibu, nke anyi maara n’ime ahuhu -casi- A ga-amụrịrị ha ebe ahụ.
Nchịkwa Ndị Ahịa, USA
Eshia na Oceania
Ndepụta abụọ gara aga na-egosi anyị na ubi ahụ ka bụ nwa agbọghọ na-achọ ndị nkwado. Mana ọ bụrụ na inwere ụlọ ọrụ German anọ, otu French, atọ Italiantali na Bekee abụọ ... ha kwenyesiri ike ịghara ịga n'ihu ka ị ghara ida ọsọ ọsọ. Middle East na United States ka ga-erigbu, ebe ya na tweezers ọ ga-ekwe omume ịchọta uche ahụ, yana ụfọdụ mba Latin America ebe gvSIG Project gosipụtara na ọ ga-ekwe omume.
Ndị na-ahazi usoro a.
OpenSource sọftụwia chọrọ ndị ọhụụ bụ ndị na - akụda mmiri mmiri, ma ọ bụ afọ ofufo ma ọ bụ na - akwụ ụgwọ. Nke a, ka e wee nwee ike imechi mgbalị niile na ibu arọ adakwasịghị otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ na-anaghị arụ ọtụtụ ọrụ. Maka nke a, Qgis nwere Kọmitii Na-ahụ Maka Projectlọ Ọrụ nke ndị otu a gụnyere:
Gary Sherman (Onye isi ala)
Jürgen Fischer (Onye isi akuko)
Anita Graser (Imewe na Obere Onye Nwe)
Richard Duivenvoorde (Onye njikwa ihe owuwu)
Marco Hugentobler (onye njikwa koodu)
Tim Sutton (Nnwale na Nkwa Mma)
Paolo Cavallini (Ego)
Otto Dassau (Ederede)
N'ụzọ na-akpali mmasị, ha abụghị aha dị iche mgbe anyị na-echeta hashtag #qgis na Twitter ma ọ bụ ndị ọrụ nwere ahụmahụ na ọgbakọ nkwado. Nke a na-egosi otu ha siri tinye aka na ọrụ ahụ, na-eche ihu ụdị nke ndị nọ na Anglo-Saxon: na-enweghị mpako nke ihe ha maara, na-enweghị anwa ịpụta, na kaadị azụmaahịa nke na-enweghịdị aha ikpeazụ.
N'ihi ìgwè a nke ndị nhazi, ha enwetala ihe ịtụnanya nke obi ike na-atọ ụtọ ịhazi ihe; Mgbe m gwachara ndị ọrụ nwere afọ ofufo na ọrụ aka ha na ndị ọrụ mmezi na akwụkwọ ọrụ. Ọ dịkwa mkpa inye aka na ime ihe ike a na nhazi nke ọrụ Qgis bụ n'oge na-adịbeghị anya; mana nwata enweela ike ime nke ọma. Agbalịrị m oge izizi a na July 2009, dị n'ụbọchị ezumike n'ihi ndọrọndọrọ ọchịchị na Honduras. Taa, echiche nke ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe na-adọrọ uche m, na-enwe afọ ojuju na mbipute dị ugbu a na udo nke uche na ihe ịchọrọ dị na ndepụta ịchọrọ nke ga-enwe obi ụtọ n'oge na-adịghị anya.
Community Onye ọrụ
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ndụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dị n’obodo. Enwere ndị ọrụ nwere oke egwu na-ebudata ụlọ kwa ụbọchị, naanị iji gosipụta etu esi adị ọhụụ, ndị na-atụ ụjọ na-atụ anya na a ga-anwale ya na ndị isi, ndị na-eme ara ara na-enye koodu ha n'ọnọdụ mgbanwe nke wii wii, ndị na-enye ndụmọdụ n'efu na obuna anyi bu ndi dere akwukwo mutara ime nyocha oge mgbe anyi n’enweghi ihe otiti. Ihe na-atọ ụtọ dịka anyị ahụtụbeghị mbụ, yana ohere nkwukọrịta niile ụwa a na-enye anyị taa.
Ihe oyiyi na-amasị m, n'ihi na ọ bụ akwụkwọ cadastral mbụ m hụrụ ka onye ọrụ ọchịchị na-eme. Zuru okè dị ka o kwesịrị ịdị. Naanị na Qgis. Enweghị anyị ọzụzụ ya.
N'ezie omume ọma nke Qgis Project na nkwado nke nkwado, njikọ aka ọnụ, usoro oge iwe, obodo na-eto eto na ọnụnọ ụlọ ọrụ nwere ike ịba uru maka mbọ ndị ọzọ n'ime gburugburu Crowdfunding.
Previous Post«Previous Nkọwa na ọdịiche dị n'etiti QGIS na ArcGIS
Next Post Open shp faịlụ na Google EarthNext »